AVV. Muse Hersi "Xubnaha barlamaanka maanta keliya ka xorooba adoonsiga qabyaaladda"
Amsterdam Talaado 21 August 2012 SMC
Waxaan wada ogsoonahay in dadka Soomaalidu ay ka kala tirsan yihiin qabiilooyin. Qabiilooyinkaas oo in badan oo wanaag ah dhexdooda qabsada. Waxaa dhacda in qof dhibaato haysa ay ka samatabixiyaan dadka ay sku qabiilka yihiin. Sidoo kale waxaa dhacda in ilma agoona, qof xanuunsan oo dad jilicsan qabiilku uu u gargaaro. Waxaan kale oo ogsoonahay in qabiilku uu u shaqeeyo caymis oo kale, tusaale ahaan marka qofku uu dhibaato aanu keligii magdhawgiisa bixin karin uu u geysto qofkale in loo qaaraamo qabiilka dhexdiisa . Qabiilku wuxuu xoogaa ka daboolay dhibaatooyinka ka dhashay dawlad la'aanta, sida amaanka iyo faqriga.
Waxaa dhacda marka in qofka Soomaaliga ah uu kala saari waayo labada hab oo qabiilka loo adeegsado. Habka dadka wax u tara, oo la isku kaalmaysto oo haddii qofku ka weecdo ay dhici karto inuu heshiiskii qabiilada ka baxay, ayna uga timaaddo dhibaato sida inuu noqdo qof takooran ama faquuqan. Arrintaas oo xilligan dawlad la'aanta iyo amaan darada ahna aad moodid in qofkii dhibaato ku noqokarto.